Teolojia mifantoka amin'i Kristy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Ny ivon'ny WKG > Teolojia mifototra amin'i Kristy
Ny iraka ataon’ny Fiangonan’Andriamanitra Maneran-tany (WCG) dia ny hiara-miasa amin’i Jesosy mba hahazoana antoka fa velona sy torina ny filazantsara. Niova ifotony ny fahatakarantsika an’i Jesosy sy ny vaovao tsaran’ny fahasoavany nandritra ireo folo taona farany tamin’ny taonjato faha-20, vokatry ny fanavaozana ny fampianarantsika. Izany dia nitarika ho amin'ny zava-misy fa ny finoana misy ny WKG ankehitriny koa dia mifanaraka amin'ny foto-pampianaran'ny Baiboly momba ny fanekem-pinoana Kristiana ortodoksa ara-tantara.
Ao anatin'ny folo taona voalohany amin'ny Ady Lehibe Faharoa isika izao1. Tamin'ny taonjato, ny fiovan'ny WKG dia mitohy amin'ny fifantohana amin'ny Reformasiona teolojika. Ity Fanavaozana ity dia mivelatra eo amin'ny fototra izay manome ny fampianarana WCG nohavaozina hihazona mafy - izany no valin'ny fanontaniana ara-teôlôjia tena manan-danja:
Iza no teny fototra amin'ity fanontaniana ity? Ao am-pon'ny teolojia tsy foto-kevitra na rafitra iray, fa olona velona, ​​Jesosy Kristy. Iza io olona io? Andriamanitra tanteraka izy, olona iray miaraka amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina, olona faharoa ao amin'ny Trinite, ary olombelona tanteraka izy, ka iray miaraka amin'ny olombelona rehetra amin'ny alàlan'ny Fahatongavana ho nofo. Jesosy Kristy dia firaisana tokana amin'Andriamanitra sy ny olona. Tsy izy irery no ifantohan'ny fikarohana ataontsika, fa i Jesosy no fiainantsika. Miorina amin'ny olona ny finoantsika ary tsy mitrangan-kevitra na finoana momba azy. Ny fiheverantsika ny teolojika dia avy amin'ny fihetsika sy fanajana lalina. Eny tokoa, ny teolojia dia finoana fitadiavana fahalalana.
Na dia efa nianatra tamim-pahatokiana ilay antsoinay hoe teolojia Trinitarian sy afovoany mifototra amin'i Kristy aza tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia nitombo ny fahatakarantsika ny fototry ny fanavaozana fanavaozana. Ny tanjonay izao dia ny hampahafantatra ireo mpitory sy mpikambana ao amin'ny WKG momba ny fanavaozana teolojika amin'ny fikambanan'izy ireo ara-pinoana ary hiantso azy ireo handray anjara mavitrika. Amin'ny alàlan'ny diantsika iraisana miaraka amin'i Jesoa dia mitombo sy mihalalina ny fahalalantsika ary mangataka ny fitarihany amin'ny dingana rehetra fanampiny isika.
Rehefa mandinika lalina kokoa an'io fitaovana io isika dia miaiky ny tsy fahalavorarian'ny fahatakarantsika sy ny fahafahantsika mitondra an'io fahamarinana lalina io. Amin'ny lafiny iray, ny valiny izay mety sy ilaina indrindra amin'ny fahamarinana teolojika izay takatsika amin'i Jesosy dia ny fametrahana ny tanantsika eo am-bavantsika fotsiny ary ny hangina am-panajana. Amin'ny lafiny iray koa, tsapanay ny antson'ny Fanahy Masina mba hanambara izany fahamarinana izany - ny hanao trompetra avy any ambony tafo, tsy amin'ny avonavona na fahatsiarovana, fa amin'ny fitiavana ary amin'ny mazava rehetra izay azontsika.
Bokikely an'ny WKG Soisa